IGnome - Ubunlog | Ubunlog (Iphepha 2)
Kule Veki kwi-GNOME: Abaphuhlisi beDesktop esetyenziswayo
Kule veki kwi-GNOME linyathelo leprojekthi ukuze, phakathi kwezinye izinto, abasebenzisi babone ukuba basebenza phi.
I-GNOME 40 sele ifumaneka kwi-Ubuntu 21.10 yakutshanje ye-Indri yemihla ngemihla yokwakha, kwaye ayisiyiyo le nto ubuyilindele.
Emva kweenyanga ezintandathu zophuhliso, kukhutshwa inguqulelo entsha yeGnome 40 ebonisiweyo ethelekiswa nohlobo lwangaphambili ...
IGNOME 40 beta iyafumaneka ngoku
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, ngokusebenzisa uluhlu lwee-imeyile, u-Abderrahim Kitouni, ilungu leqela lokuphuhlisa imeko ye desktop ...
I-GNOME 3.38, ngoku iyafumaneka kwi-desktop ezakusebenzisa iGroovy Gorilla ngophuculo oluninzi
IGNOME 3.38 ngoku ifumaneka ngokusemthethweni, kwaye iya kuba yindawo yemizobo eya kusetyenziswa ngu-Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla ukusukela ngo-Okthobha.
Abaphuhlisi be-GNOME basebenza kwisiqalisi sesicelo esitsha esiza kufika kwi-GNOME 3.38 notshintsho kuyilo lwayo.
I-GNOME 3.37.1 ngoku iyafumaneka njengenyathelo lokuqala ukuya kwindalo yeGroovy Gorilla
IGNOME 3.37.1 ifikile njengenyathelo lokuqala ukuya kwi-GNOME 3.38, indawo yemizobo eza kusetyenziswa ngu-Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla, zineendaba ezincinci.
IGNOME 3.36.1 ifika nezilungiso zokuqala ukulungiselela ukukhutshwa kwe-Ubuntu 20.04 beta
Kukhutshwe i-GNOME 3.36.1 kwimizuzwana embalwa edlulileyo ngolungiso lokuqala lwendawo yemizobo eza kusetyenziswa ngu-Ubuntu 20.04 Focal Fossa.
I-GNOME 3.36, ngoku ikhona inguqulelo yemeko yemizobo eza kusetyenziswa ngu-Ubuntu 20.04 Focal Fossa
I-GNOME 3.36 ngoku iyafumaneka, indawo yemizobo eya kubandakanya uhlobo olulandelayo lwe-Ubuntu oluza kukhutshwa ngo-Epreli.
IGNOME 3.36 iyeza kwiveki ezayo, kwaye iRC yayo yamva nje ibandakanyile olu tshintsho ngomzuzu wokugqibela
I-GNOME 3.36 izakufika ngeveki nje, kodwa abaphuhlisi bayo babandakanye utshintsho kumzuzu wokugqibela kwi-RC 2 yenguqulo elandelayo yendawo yemizobo.
I-GNOME 3.34.4 ifika ukulungisa bugs ezininzi kolu ngcelele
IGNOME 3.34.4 ifikile ukulungisa uninzi lweebugs ezaziwayo kolu ngcelele. Ikhowudi yakho ngoku inokukhuphela kwaye iya kubetha kwii-PPAs ezinkulu kungekudala.
I-GNOME 3.36 kunye neendaba zayo zinokubonakala kwividiyo, kunye nemowudi entsha yokungaphazamisi kunye neNkqubo yoLwandiso
Kule nqaku sithetha ngezinto ezininzi eziza kufika nge-GNOME 3.36, ekulindeleke ukuba ibe kukukhutshwa okukhulu.
I-GNOME 3.36 ijonge ukuba yenye yokukhutshwa okukhulu kwenye yezona ndawo zaziwayo zemizobo
Iprojekthi ye-GNOME isebenza ekwenzeni i-GNOME 3.36 enye into enkulu yokukhutshwa kwimeko yemizobo, eziziindaba ezimnandi ku-Ubuntu.
IGNOME 3.34.3 ifika ukuze iqhubeke nokulungisa imeko-bume yoBuntu kunye nezinye ii-distros ezidumileyo
Iprojekthi ye-GNOME ikhuphe i-GNOME 3.34.3, ehambelana nokukhutshwa kwesithathu kulondolozo kolu ngcelele kwaye iyaqhubeka nokupolisha imeko eyaziwayo yemizobo.
Ubuntu bunesiseko esifihlakeleyo sesishicileli esifakwe ngokungagqibekanga. Sikuxelela indlela yokuyisebenzisa
I-GNOME, indawo yemizobo esebenzisa Ubuntu, inerekhoda yesikrini efakwe ngokungagqibekanga. Kule nqaku sikufundisa yonke into ofuna ukuyifumana.
IGNOME 3.35.1, inyathelo lokuqala kwindlela eya kwiGNOME 3.36 ngoku iyafumaneka
Iprojekthi ye-GNOME ikhuphe i-GNOME 3.35.1, inguqu engazinzanga yendawo yayo yemizobo eyilitye lokuqala kuphuhliso lwe-GNOME 3.36.
Ubuntu MATE 19.10 Eoan Ermine ukhululwe ngokusesikweni. Kweli nqaku siza kukuxelela ezona ndaba zibalaseleyo zizisa phantsi kwengalo.
I-GNOME 3.34.1 ifika ilungisa iibugs zokuqala ezifumaneka kolu ngcelele
IGNOME 3.34.1 ngoku iyafumaneka. Olu lusuku lokuqala lokukhululwa kolu luhlu lujolise kulungiso lwebug.
Ke unokugcina i-GNOME bar yebar rhoqo ngaphezulu
Kule nqaku sikubonisa ukuba ungayigcina njani ibha yokuhambisa ye-GNOME rhoqo ngaphezulu. Isebenza kwi-GNOME 3.34 kunye nezinye iinguqulelo.
Ubuntu 19.10 Eoan Ermine sele ibandakanya i-GNOME 3.34 kunye neLinux 5.3
Inguqulelo yoKwakha yemihla ngemihla Ubuntu 19.10 sele ibandakanya i-GNOME 3.34 kunye neLinux 5.3, eya kuthi ibe yindawo yemizobo kunye nomxholo we-Eoan Ermine.
IGNOME 3.34 ngoku iyafumaneka. Ezi ziindaba eziza ku-Ubuntu 19.10 Eoan Ermine
Ngoku ikhona i-GNOME 3.34, uguqulelo lwendawo yemizobo eza kuza ku-Ubuntu 19.10 Eoan Ermine. Ezi zezona ndaba zibalaseleyo.
I-GNOME 3.34 RC2, ngoku iyafumaneka ukuvavanya ukuba loluphi olona hlaziyo lukhulu kwindawo yemizobo eyaziwayo
Iprojekthi ye-GNOME ikhuphe i-GNOME 3.34 RC2, eyokugqibela kunye neyokugqibela yoMgqatswa woKhupha apho iya kuba luhlaziyo olukhulu kwimeko yemizobo.
IGNOME 3.34 iBeta 2 ibandakanya utshintsho oluninzi kwimizuzu yokugqibela
Ngokukhululwa kungekudala, i-GNOME 3.34 iBeta 2 ifikile kwaye yazisa utshintsho ngomzuzu wokugqibela oluya kuphucula amava omsebenzisi.
I-GNOME 3.34 beta ngoku iyafumaneka. Ezi ziindaba zakho
Iprojekthi yeGNOME ikhuphe i-beta yokuqala ye-GNOME 3.34, uguqulelo oluza kwi-Ubuntu 19.10. Sikuxelela zonke iindaba zayo.
IGNOME 3.33.4 sele ikho, ilungiselela i-beta yenguqulo eza kufika ku-Ubuntu 19.10
Ngoku ikhona i-GNOME 3.33.4, uguqulelo lwamva nje ngaphambi kokukhutshwa kwe-GNOME 3.34, uguqulelo oluza kubandakanya Ubuntu 19.10 Eoan Ermine.
Iphaneli engabonakaliyo kunye neMenyu usebenzisa iCompiz
Emva kokufaka oluqwalaselo kwiCompiz yethu yemenyu kunye nephaneli (nangona ingabonakali kwisikrini) iya kuvela ...
I-Fecfactor indibuze izolo ukuba ndishicilele ubumbeko lwe-conky endiyibonisayo kumfanekiso ongezantsi.Ungakwenza njani ...